လူတောင် မှားသွားလောက် တဲ့ မဂ္ဂဇင်း ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က မင်းသမီးချောလေး သရုပ်ဆောင် ယဉ်လက် ရဲ့ အလှ - Zeekwat Hot News
လူတောင် မှားသွားလောက် တဲ့ မဂ္ဂဇင်း ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က မင်းသမီးချောလေး သရုပ်ဆောင် ယဉ်လက် ရဲ့ အလှ
July 5, 20190229
ပရိသတ်ကြီးရေ…. သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လက်ကတော့အက်ရှင် ဇာတ်ကားတွေနဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ကို စွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ တကယ်တော် တဲ့ တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် ကြယ်ပွင့်လေး တစ်ပွင့်ပါနော် အက်ရှင်မင်းသမီးလေး လို့တောင် ထင်ရက်စရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပြုံး
Source : Yin Let – Facebook
ချိုချိုလေး တွေနဲ့ သူမရဲ့ အလှတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အထူး သတိပြု တဲ့ မင်းသမီးလေး တစ်ယောက်ပါနော် သူမ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ် မှာ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နှစ်ပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ ရှိတာကြောင့် ခနလေး အတွင်းမှာပဲအောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး တစ်ယောက် အဖြစ် ရပ်တည်လို့ နေနိုင်ခဲ့တာပါ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှား တွေကတော့ ဗီဒီ
ယို နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ကို ရိုက်ကူးနေပြီး သူမ ၀ါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်နေတာပါ သူမ ရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်လေးတွေကို တော့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် တခုဖြစ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့နေ့စဉ်လိုလို တက်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ် အခုတခါမှာ ဆိုရင်လည်း သူမရဲ့ အလှ ပုံရိပ် လေးတွေကို တက်ဆက်ပေးထား တာ
ကို ဇီးကွက် ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်လို့ တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါရစေနာ် …. ချစ်ပရိသတ်တွေကလည်း ယဉ်ယဉ်လေး နဲ့ လှနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လက်ကို ချစ်ရင် တခုခုပြောခဲ့နော် ဒီလို အနုပညာရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှား မှု ပုံရိပ်ေ လးတွေကို သိရှိခံစား နိုင်အောင်လို့ Page လေး ကို Like လေး လုပ်ခဲ့ဖို့ ပြောခဲ့ပါစေနော်.…။ အခုလို ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီး ကိုလည်း ကျေးဇူး အထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်.…။
လူတောငျ မှားသှားလောကျ တဲ့ မဂ်ဂဇငျး ကွျောငွာ ရိုကျကှငျး ပျေါက မငျးသမီးခြောလေး သရုပျဆောငျ ယဉျလကျ ရဲ့ အလှ
ပရိသတျကွီးရေ…. သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ယဉျလကျကတော့အကျရှငျ ဇာတျကားတှနေဲ့ အတူ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ရငျကို စှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ ဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ တကယျတျောတဲ့ တကျသဈစ သရုပျဆောငျ ကွယျပှငျ့လေး တဈပှငျ့ပါနျော အကျရှငျမငျးသမီးလေး လို့တောငျ ထငျရကျစရာ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေး တှနေဲ့ သူမရဲ့ အလှတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကေ အထူး သတိပွု တဲ့ မငျးသမီးလေး တဈယောကျပါနျော သူမ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာအလုပျ မှာ စိတျရော ကိုယျပါ နှဈပွီး လုပျကိုငျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ခနလေး အတှငျးမှာပဲ အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး တဈယောကျ အဖွဈ ရပျတညျလို့ နနျေိုငျခဲ့တာပါ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှား တှကေတော့ ဗီဒီယို နဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ ကို ရိုကျကူးနပွေီး သူမ ၀ါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပျကို ကွိုးကွိုးစားစား လုပျကိုငျနတောပါ သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှကေို တော့ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ တခုဖွဈတဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါမှာတော့ နစေ့ဉျလိုလို တကျဆကျပေးလေ့ ရှိပါတယျ အခုတခါမှာ ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ အလှ ပုံရိပျ လေးတှကေို တကျဆကျပေးထားတာကို ဇီးကှကျ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျလို့ တငျဆကျပေး လိုကျပါရစနျော …. ခဈြပရိသတျတှကေလညျး ယဉျယဉျလေးနဲ့ လှနတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ယဉျလကျကို ခဈြရငျ တခုခုပွောခဲ့နျော ဒီလို အနုပညာရှငျတှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှား မှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစား နိုငျအောငျလို့ Page လေး ကို Like လေး လုပျခဲ့ဖို့ ပွောခဲ့ပါစနေျော.…။ အခုလို ဝငျရောကျ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီး ကိုလညျး ကြေးဇူး အထူးပဲ တငျရှိပါတယျ.…။
လူတိုင်းကတော့ ချစ်တတ်ကြတာပဲ ဒါပေမယ့် ချစ်တတ်တာခြင်းကျမတူကြဘူး ဆိုတဲ့ အိချောပို